Hollywood Efu Mirror, Style Makeup Enyo na Ìhè, Tabletop ma ọ bụ Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya na
Hollywood NGANGA mirror na ọkụ
The BEAUTME Hollywood Efu Mirror bụ oge a na-efu na-enweta-a gịrịgịrị na sleek ma adọrọ adọrọ imewe na-enye a zuru okè, ọbụna ọkụ na elu mirror echiche doo anya. Ezigbo maka ntecha ngwa mgbe ọ bụla ọnọdụ, n'ụlọ ma ọ bụ ọkachamara-na-na-ewere na zuru okè Instagram selfie!
ọla ntị Yi
edozi isi Design
TABLETOP / mgbidi nọkwasịrị n'ịnyịnya na mirror
Abụọ na ụdị Using- 1) Tinye ihe ndị mejupụtara mirror na table; 2) Ikowe ndị mi rror on thewall
Jiri etemeete mirror na table
Efu mirror nghọta na mgbidi
Professional Efu Mirror na Ìhè ahọrọ ìhè mmechi ìhè nke ụbọchị ahụ, ka mma ịghọta ogo ndo. Mere nke elu àgwà aluminum etiti, ike, siri ike ma varnished tinplate metal etiti na isi ekwe ka ọ na-anọ sturdy na table. Kenkowaputa enweghị nkebi splicing etiti na-eme ka mirror ọzọ elu-ọkwa na ndị mara mma.
Save ọkụ eletrik, ejiji na gburugburu ebe obibi nchebe.
Smart aka ịchịkwa
1. Touch ejighị ya kpọrọ agbanye / gbanyụọ ọkụ ìhè / ụbọchị ìhè.
2. Jide ogologo aka ịgbanwe ọkụ ihie.
PRODUCTS REAL ogbugba
Power: 100-240V, DC12V / 1a nkwụnye nkwụnye
Ikanam ọkụ na agba: na-ekpo ọkụ odo ìhè (3200k) & ọcha ụbọchị ìhè (6500k)
Glass size: 598mm (L) * 498mm (H) (23.54 "* 19,6");
Mirror arọ: banyere 5kg
Nkwakọ nkọwa: EPE ụfụfụ + Box ngwugwu
Hollywood Efu Mirror
Hollywood Efu Mirror With Ìhè
Large Size Hollywood Efu Mirror
Efu Mirror Hollywood
Hollywood Efu Mirror na Dugara Bulbs, Tableto ...
Hollywood Style ìhè Tabletop Makeup Mirror, ...
Hollywood ìhè Efu Makeup Mirror na Lig ...
Makeup Mirror With Light Bulbs , Mirror With Light Bulbs , Efu Mirror With Light Bulbs, Efu Light Bulbs ,